LG Watch Style na LG Watch Sport, elekere ọhụụ abụọ LG rụpụtara maka Google | Akụkọ akụrụngwa
LG Watch Style na LG Watch Sport, elekere ọhụụ abụọ LG rụpụtara maka Google
Ọ dị ka ọ dị na February 9 ọzọ, na mgbakwunye na ịhụ ọhụụ gam akporo Wear 2.0, Google akwadebela elekere amamịghe nke LG ga-arụpụtara. Anya elekere abụọ ndị a ga-abụ LG Watch Sport na LG Watch Style, dị ka Evan Blass si kwuo, nke a maara nke ọma na netwọk mmekọrịta Twitter dị ka evleaks.
O nwere ike ịbụ na a na-ewepụta elekere abụọ ndị a na aha Blass, nke ahụ bụ n'ihi na mgbe akụkọ ụdị a na-apụ apụ, ọ na-akụkarị ntụpọ ahụ. N'ọnọdụ ọ bụla, anyị agaghị aga n'ihu n'ihe omume na ihe mbụ ọ dọrọ aka ná ntị na akaụntụ gọọmentị ya bụ mwepụta nke gam akporo Wear 2.0 nakwa na anyị akara ụbọchị a na kalenda na kalenda ahụ, na tweet ọzọ ọ bipụtara nke abụọ a wearables ọhụrụ.
Nke a bụ tweet na nke onye a maara nke ọma @evleaks kwusara akụkọ ahụ na netwọk mmekọrịta nke mkpụrụedemede 140:
E kpughere ngwa ngwa mbụ gam akporo 2.0: Google na LG's Watch Sport na Watch Style https://t.co/6Oc7LuoYu3 pic.twitter.com/NO8rk1rYwS
- Evan Blass (@evleaks) 17 de enero de 2017
Mana ọ bụghị ihe niile dị n'aka LG yana ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na maka oge ahụ aha LG pụtara na ntuchi ahụ, anyị na-eche ihu na mmekorita n'etiti Google na LG, yabụ anyị amaghị ma ọ ga-eme na njedebe dị ka ya na pikselụ na HTC… N'ọnọdụ ọ bụla, ihe dị mkpa bụ ịhụ nkọwa nke elekere abụọ ndị a ebe ọ bụ na e nweghị ihe oyiyi a kpochara n'oge ahụ.
Sportdị egwuregwu ga-enwe oke kachasị elu, na agba abụọ, titanium na acha anụnụ anụnụ. Na ihuenyo ga-abụ OLED maka abụọ ma n'ihe banyere ụdị egwuregwu ọ ga-enwe nha nke kariri Style: 1,38 sentimita asatọ na 480 x 480 pikselụ mkpebi na 1,2 sentimita asatọ na 360 x 360 pikselụ.
Ha abụọ ga - enwe 4GB nke ebe nchekwa dị n’ime ma ihe nlereanya Sport ga-adịtụ mma na batrị na RAM: 768MB nke RAM na batrị 430mAh maka ụdị egwuregwuma 512MB RAM nwere batrị 240mAh maka Style. Nhazi nke nche ahụ na-egosi na ọ ga-abụ na nke abụọ okpueze dijitalụ ịnyagharịa na-enweghị imetụ ihuenyo ozugbo na a anụ ahụ button, ma anyị nwere obere nkọwa banyere imewe.
Ọzọkwa ihe dị iche na ụdị abụọ ahụ akara site na njikọ yana ọ bụ na Sport ga-agbakwunye na mgbakwunye na njikọ WiFi, Bluetooth ha abụọ nwere, tinye GPS, NFC, 3G na LTE. N'aka nke ọzọ, asambodo IP ahụ dịkwa iche na ụdị abụọ a: IP68 maka egwuregwu na IP67 maka Style. Enweghị data na ọnụahịa ma ọ bụ ụbọchị ha ga-ere, mana anyị nwere olile anya na site na February 9 ọzọ ha ga-ewepụ obi abụọ ndị a ka ga-achọpụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » LG Watch Style na LG Watch Sport, elekere ọhụụ abụọ LG rụpụtara maka Google
Atọ Samsung Ngosipụta vidiyo nwere ike igosi Galaxy S8
Nyochaa nke IRISPen Ikuku 7, nyocha ikuku n'ụdị pen